Ọ bụ otu n'ime ndị kasị taa akpụ ihe aga-eme na-anakọta songs na hazie ha. A onye ọrụ nwere ike iche-arụsi ọrụ ike abuana ke obon songs na-ejide n'aka na ha niile na-anọgide na otu ka a kpọmkwem ihe omume. Ọ bụ n'ihi na otu ihe ahụ mere na ha achọghị ndị ọzọ na-aga site n'otu isi ike dị ka ha mere ịchọta, na-anakọta na hazie songs na nke kacha mma o kwere omume n'ụzọ. Na ndị ọzọ aka mgbochi na iTunes adịghị ekwe ka ndị ọrụ na-esi na ha listi ọkpụkpọ site na ndị ọzọ na ya mere mkpa nke hour bụ ịchọta free ụzọ na-eme ka n'aka na listi ọkpụkpọ na-anapụta ndị hụrụ n'anya dị ka onyinye ma ọ bụ a iriba ama nke amara n'efu nke mere na ha nwere ike ịnụ ụtọ songs na ala na afọ ojuju.
Part1: Free ụzọ ịkọrọ iTunes playlist
Part2: Site Mac
Part3: Site CD-ere ọkụ
Part4: Easy ụzọ ịkọrọ iTunes Playlist ka iOS (iPhone / iPad / iPod) na Wondershare TunesGo
Part5: Share iTunes Playlist na Android na TunesGo
Part1.Free ụzọ ịkọrọ iTunes playlist
Ọ bụ otu n'ime ajụjụ ndị nke nwere ọtụtụ azịza na ọrụ na nke a mere ka n'aka na Okporo ụzọ awara awara na-abụghị nanị enyoba kamakwa gwa ndị ọzọ mere na nyefe nke playlist bụghị a nnukwu ndibiat mgbe niile. A nkuzi bụ ma banyere free na akwụ ụgwọ ụzọ ịkọrọ iTunes listi ọkpụkpọ na ndị ọzọ mere na ndị ọrụ nwere ike ịhọrọ ndị dị ka ha uche na ọchịchọ na idebe onye ọrụ easiness na-echebara ụzọ na-kwuru n'okpuru ebe a:
Part 2. Site Mac
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma ụzọ na-eme ka n'aka na iTunes na-agafere site na otu Mac ọzọ enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Iji jide n'aka na needful na-eme na ụzọ kasị mma ọ na-gwara iji jide n'aka na ndị na-esonụ na-soro na otu wee na ha na-kwuru iji zere mgbagwoju anya ọ bụla nke mere na nyefe bụghị ike na niile:
m. Na-esi na chọrọ playlist onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na listi ọkpụkpọ na akara ngosi na-ahụ pịrị na iTunes sidebar.
ii. Onye ọrụ mgbe ahụ mkpa ijide n'aka na na faịlụ button a pịrị na isi mmanya nke iTunes na-amalite usoro:
III. Ozugbo ọ na-eme onye ọrụ kwesịrị ka pịa Akwụkwọ:
too ogologo. Na-esote menu onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na mbupụ playlist na-ahọrọ:
v. The faịlụ a ga-azọpụta na ndabara ndọtị nke XML. Ọ bụ-ahụ kwuru na ndọtị bụ mgbe a ga-agbanwe.
vi. Nke a XML faịlụ nwere ike na-akọrọ ndị onye ọ bụla na nnata nnọọ nwere iji jide n'aka na site na iji otu usoro n'elu playlist na-dị ka Mac mezue usoro.
Part 3. Site CD ọkụ
Ọ bụkwa a dị mfe ma free onu iji jide n'aka na iTunes playlist na-agafere site na otu usoro ọzọ ma ọ bụ na-akọrọ ndị ọtụtụ mmadụ dị ka o kwere omume. Na-esonụ bụ usoro a ga-soro na nke a:
m. Onye ọrụ kwesịrị iji nweta iTunes on Mac ma ọ bụ PC na-amalite usoro:
ii. ii. A ọhụrụ playlist a na-ahụ na-kere:
III. The songs na-ahụ na-kwukwara na playlist mere na playlist adịghị anọgide na ndabere ala ie efu:
too ogologo. A ide CD a na-ahụ na-etinyere ruo mgbe ọ na-ghọtara:
v. Onye ọrụ na onye ahụ nwere na-eso faịlụ> Ọkụ playlist disk:
vi. Mgbe na-ahọpụta apa ntọala onye ọrụ kwesịrị ka pịa apa ọkụ:
Part 4. Easy ụzọ ịkọrọ iTunes Playlist ka iOS (iPhone / iPad / iPod) na Wondershare TunesGo
Ọ bụ doro anya na ndị kasị mma na ndị kasị dị irè n'ụzọ na-eme ka n'aka na nke nke na-ekere òkè listi ọkpụkpọ na-kpebiri na onye ọrụ mgbe chere ihu ọ bụla nke na nke a. Wondershare Mgbe niile na-eme ebube na oge a ha na-a nwere ọgụgụ isi, ike na ọrụ enyi na enyi software omume iji jide n'aka na-ekere òkè listi ọkpụkpọ gafee dị iche iche iOS ngwaọrụ nwekwara adịghị ihe nke ọ bụla ọzọ. The onye ọrụ nwere iji jide n'aka na ndị na-esonụ usoro a soro iji jide n'aka na arụpụta ihe kasị mma na-enwetara na software na-ghọtara nke mere na ọ dịghị mgbe anọgide na nke n'ihi na onye ọrụ iji nke a software na-eme n'ọdịnihu:
ii. Onye ọrụ ahụ kwesịrị ijide n'aka na iOS ngwaọrụ na jikọọ na PC na eriri USB:
III. The interface ga-apụta otu ugboro ọzọ na ndị niile na nchekwa na-emi odude ke ngwaọrụ:
too ogologo. Ozugbo omume bụ n'ụzọ zuru ezu ọtọ ọ na-gwara iji jide n'aka na "Nyefee Music" na akara ngosi na ala nri akuku na-emi odude na-enwe na-usoro mere na mezue nyefe nakwa:
Part 5. Share iTunes Playlist na Android na TunesGo
Ọtụtụ ndị na-achọta ya nnọọ ike ijide n'aka na listi ọkpụkpọ site na iOS na-agafere ka Android OS na ala na afọ ojuju Otú ọ dị na TunesGo ọ bụghị a nnukwu ihe mgbe niile. Site n'ịgbaso otu ụzọ nke na-ebufe iTunes playlist ka iOS a onye ọrụ nwere ike nyefee ihe iOS dabeere playlist ka Android na ala na afọ ojuju. Iji nweta ọrụ mere n'ime oge ọ bụla ọ na-gwara na-eso nzọụkwụ n'okpuru iji jide n'aka na ihe bụ nsogbu kpebiri:
m. Onye ọrụ dị nnọọ mkpa ijide n'aka na na android ngwaọrụ na jikọọ na PC ma ọ bụ Mac mere na usoro amalite:
ii. The ugbua arụnyere TunesGo ga-akpaghị aka ịchọpụta na ngwaọrụ na ga-emeghe interface dị ka e gosiri na ọnụ ọgụgụ n'okpuru:
III. Na ekpe panel onye ọrụ kwesịrị ka pịa playlist ọdịnaya nke nke na-achọ transfer:
too ogologo. Na nri panel onye ọrụ kwesịrị ka pịa bupu mgbe ahụ music:
v. Nke a nwere ọgụgụ isi software ga-eme ka n'aka na playlist na-synced na android ngwaọrụ na ya mere na ole na ole clicks usoro e okokụre dị ka kwa onye ọrụ ọchịchọ.
> Resource> iTunes> Easy ụzọ ịkọrọ iTunes listi ọkpụkpọ na ndị ọzọ